Air Disinfection Cube - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Ajụjụ FAUCI Air Disinfection Cube Ajụjụ
Kedu ka esi eji ngwaahịa a?
Azịza: bepụ ma wepụ ihe nkwakọ ngwaahịa na gburugburu Cube, ị nwere ike ịmalite iji ya.
① Enwere ike idowe ya na tebụl, tebụl ogbako, tebụl ime ụlọ, tebụl ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ buru ya na -aga iji kpochapụ ikuku dị nso ozugbo;
Enwere ike itinye ya na igbe ụmụaka, igbe ọkọnọ, igbe nchekwa, wee na -ehichapụ ihe ndị dị na igbe ahụ;
Ị nwere ike ijide ya n'aka gị n'oge ọ bụla iji nyere aka gbuo nje ma ọ bụ nje nwere ike merụọ n'aka gị.
Kedu ka ngwaahịa a si agbaze?
Azịza: Ihe mejupụtara ihe eji eme ihe, ihe FAUCI AAPG, nwere ike jiri nwayọ wepụta ihe nje na-efe efe n'ime ikuku dị nso, na-egbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nje ọ bụla ma ọ bụ nje na ikuku ozugbo na ngwa ngwa.
Chlorine dioxide bụ ọgbọ ọhụrụ amaara nke ọma nke na-eme ka ọ ghara ịdị irè. Ndị mmadụ na -ejikarị chlorine dioxide eme ihe maka ebumnuche ịgba ọgwụ mgbochi. Nrụpụ ọgwụ ya bụ ugboro 2.6-10 nke ihe ndị na-egbu ihe nkịtị dị ka mmanya 75%, chlorine, na acid hypochlorous. Enwere ike ikesa chlorine dioxide dị ọcha nke ọma n'ikuku n'ime steeti molekụla nano, yabụ na ọ nwere arụmọrụ nsị dị elu ugboro 50-100;
Ụdị oxygen ROS na -arụ ọrụ na -ezo aka na ikuku oxygen na -arụ ọrụ dị ka radicals free hydroxyl na radical free peroxy, nke kwekọrọ na isi ihe na -egbu nje bacteria na ahụ mmadụ, na -esite na mbibi na ikesa mmiri. Ọrụ nsị nke ihe ikuku oxygen ndị a na -arụ ọrụ dị elu karịa nke chlorine dioxide dị ọcha. Ọbụnadị maka endospores nke kacha sie ike igbu n'ụwa, ROS nwere ike wepụ ha ozugbo. (Ikuku oxygen na-arụ ọrụ ROS nwere ọrụ dị elu yana obere ndụ. Naanị ọnụọgụ ọnụọgụ dị nso na ihe eji arụ ụlọ.
Kpọtụrụ, ngwaahịa a ọ nwere ike igbu COVID-19 na ụdị ya?
Azịza: Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ngwaahịa ndị yiri ya n'ahịa na-eji sodium hypochlorite dị ọnụ ala (ya bụ, akụrụngwa nke Disinfectant 84), nke na-ewepụta acid hypochlorous site na mmeghachi mmiri, wee mepụta chlorine dioxide na obere ego. nke gas chlorine na-egbu egbu (Mkpokọta chlorine kwesịrị naanị iru 0,001 mg/L ka ọ nwee ike bute nsị na-adịghị ala ala, yabụ enweghị ike iji hypochlorous acid maka nsị ikuku), ma ọ bụ jiri otu ihe ahụ dị ọnụ ala dị ọnụ ala klorine dioxide banye. mmiri iji hapụ chlorine dioxide. Mgbe ikuku iru mmiri dị oke elu, enwere ike ịtọpụ ngwa ngwa, na mbelata ga -agwụ n'ime obere oge.
Ngwa nje arụrụ arụ (ihe FAUCI AAPG) dị na ikuku ikuku ikuku FAUCI na-anabata teknụzụ ikuku na-arụ ọrụ nke ọma na teknụzụ nje na-ewepụta ngwa ngwa na-ewepụta teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara n'onwe ya, nke nwere ike jiri nwayọ na nwayọ hapụ mpekere ikuku chlorine dioxide dị ọcha na ROS dị ọcha. ion oxygen na -arụ ọrụ ruo ogologo oge.
Ihe na -emebi ihe nke ikuku ikuku FAUCI bụ chlorine dioxide dị ọcha na ion oxygen na -arụ ọrụ, nke nwere arụmọrụ na nchekwa dị elu; ebe ngwaahịa ndị ọzọ enweghị ROS oxygen na -arụ ọrụ, enwere ike ịnwe hypochlorous acid, chlorine na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu nke mmachi mmadụ machibidoro iwu, nke na -abụghị naanị nwere arụmọrụ dị ala, kamakwa o nwere ihe egwu nchekwa;
② FAUCI cube disinfection cube nwere mmetụta na-aga n'ihu ruo ọnwa 3, ebe ngwaahịa ndị ọzọ kacha karịa ọnwa 1-2.
Ngwaahịa a enwere nchekwa maka mmadụ na anụmanụ?
Azịza: Ọdịdị oxygen na-arụ ọrụ ROS nke arụpụtara arụpụtara n'ime ihe FAUCI AAPG nke ngwaahịa a bụ otu ihe kacha mkpa na enweghị ikewa n'ahụ mmadụ nke na-egbu nje na nje. Ọ bụkwa ihe ebumpụta ụwa ma dịkwa n'ime akara. Ọ bara uru na adịghị emerụ ahụ mmadụ.
N'otu oge ahụ, FAUCI cube disinfection cube (ihe FAUCI AAPG wuru n'ime) agabigala nnwale CMA/CNAS dị mkpa: nnukwu nnwale nnwale nsị na-egosi na ọ naghị egbu egbu; mmechi ule micronucleus sel bụ ihe ọjọọ niile, nke pụtara na enweghị mmụba anụ ahụ selụ na enweghị nsí mkpụrụ ndụ ihe nketa;
A na-eji ihe FAUCI AAPG na ngwaahịa metụtara ngwaahịa a na China na ụfọdụ mba ndị ọzọ kemgbe ngwụcha afọ 2019 maka mgbochi na ịchịkwa ọrịa COVID-19, na ahụbeghị mmeghachi omume ọ bụla.
Azịza: eAma mara ka mmiri ghara ịsacha ya. Karịsịa, ọ dị mkpa igbochi ịkpọtụrụ uwe, akpụkpọ anụ, na igwe mgbe ekpughere ya na mmiri dị ka mmiri ga -eme ka mbelata ngwa ngwa nke ngwa ahụ dị ngwa. Enwere ike ịzụrụ ngwaahịa ọhụrụ n'ụzọ dabara adaba.
Ekwesighi agwakọta ya na ihe ndị na -egbu egbu alkaline ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ndụ;
Ọ ka dị m mkpa iyi nkpuchi ma ọ bụrụ na m tinye cube ọgwụ ọgwụ a n'akụkụ m?
Azịza: A ka na -achọ ya na ọnọdụ dị ize ndụ.